Indlu Eqashwayo e-Ulwe, eMumbai
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Maharashtra » Mumbai » Ulwe » Indlu Eqashwayo e-Ulwe, eMumbai1
I-1bhk Rent evulekile endaweni ephambili ye-ULWE njengakuzo zonke eziseduze nalesi sakhiwo icwecwe lesikole lebhange lasekolishi i-ATM nsuku zonke idinga ukuhamba nje endaweni eflethi shayela eminye imininingwane yokumaketha ngumxhumanisi we-navadurga
Xhumana nomkhangisi 892883xxxx
I-Ulwe iyindawo ezayo futhi esheshayo e-Navi Mumbai eyingxenye yesifunda saseRaigarh. Yakhiwa futhi yaqanjwa yi-CIDCO egcine amahlathi ayo aluhlaza okotshani, ayinika indawo enhle. IConnecaction Ulwe ixhumeke kahle neningi lezindawo eziseNavi Mumbai ngokuhamba komgwaqo. Amabhasi a-BEST neNMMI enza umsebenzi omuhle kakhulu ekuxhumaniseni le ndawo nakwezinye izindawo zaseMumbai naseNavi Mumbai. Isiteshi Sesitimela esisheshayo esisebenzayo esizoqala ukusebenza sizonikeza le ndawo ukuxhumana okuhle. Njengamanje, esiteshini sesitimela esiseduze iVashi, eqhele ngamakhilomitha angama-20. Isikhumulo sezindiza iChhatrapati Shivaji International ngamakhilomitha angama-40 ukusuka lapha. Izindawo zokuhlalaReal estateUlwes zokuhlala ziqukethe amafulethi. Iningi lezindawo ezakhiwe lapha lakhiwa kanti futhi lizobe lakhiwa ngu-2017-2018. Izilinganiso zentengo yempahla njengamanje kulinganiselwa ukuthi ziphakathi kwama-Rs 4,750 kanye nama-R8 5,850 nge-sq. Izindlu ezizimele, amanani entengo aphakathi kuka-Rs 4,300 kuya ku-Rs 4,850 nge-sq ft.Social ingqalasizindaUthe kusakhiwa ingqalasizinda yezenhlalo izidingo eziyisisekelo zokunakekelwa kwempilo, imfundo, ukuyothenga kanye nezitolo zomnyango wezidingo nezidingo zansuku zonke. I-Ramsheth Thakur International Sports Complex itholakala lapha. INavi Mumbai Special Economic Zone iyipaki ye-IT ekhula ngokushesha kule ndawo. Izikhungo zezemfundo ezifana nale ndawo zifaka i-AP Bhoir Vidhyalay, iSikole esisha se-English kanye ne-Raigarh Zilla Parishad School.